Su'aalaha la isweydiiyo - AOOD Technology Limited
Maxay ku kala duwan yihiin faraantiyo simbiriirixan iyo ururada roondada?
Labada siddo sibidhka iyo ururada rogaya labadaba waxaa loo isticmaalaa in lagu wareejiyo warbaahinta qayb ka mid ah wareega oo loo wareejiyo qayb taagan marka la wareegayo. Laakiin warbaahinta siddooyinkii siibadu waa awood, calaamad iyo xog, warbaahinta ururada Rotary 'waa dareere iyo gaas.
Ka warran dammaanadda AOOD badeecadaha rog -rogga korontada?
AOOD waxay haysataa dammaanad hal sano ah dhammaan badeecadaha soo noqnoqda ee korontada marka laga reebo siddooyinkii silsiladda. Haddii unug kasta uusan si fiican ugu shaqeyn jawiga shaqada caadiga ah, AOOD ayaa dayactiri doonta ama ku beddeli doonta lacag la'aan.
Sida loo doorto tusaalaha giraanta sibidhka ee ku habboon arjigayga?
Tirada wareegyada, hadda iyo danab, rpm, xadka cabbirka ayaa go'aamin doona nooca loo baahan yahay giraanta silsiladda AOOD. Intaa waxaa sii dheer, waxaan tixgelin doonaa dalabkaaga dhabta ah (gariirka, waqtiga shaqada joogtada ah iyo nooca calaamadda) oo waxaan kuu samayn doonaa xalka saxda ah.
Waa maxay sababta aan u dooranayo AOOD TECHNOLOGY LIMITED oo ah lammaaneheenna sibidhka kabaha? Waa maxay faa'iidadaada?
Ujeedada AOOD waa in la qanciyo macaamiisha. Laga soo bilaabo naqshadeynta bilowga ah, xulashada maaddada, wax soo saarka, tijaabinta, xirmo iyo gaarsiintii ugu dambeysay. Waxaan had iyo jeer bixinnaa adeegga ugu wanaagsan waxaanan hubinnaa in macaamiisheena ay ku heli karaan badeecadaha tayada ugu wanaagsan waqtiga ugu gaaban.
Sidee AOOD uga hortagi doontaa faraantiga siibista faragelinta signalada?
Injineerada AOOD waxay ka hortagi doonaan faragelinta signalada dhinacyadan hoose: a. Kordhi fogaanada faraantiga signalada iyo faraantiyada awoodaha kale ee gudaha giraanta siibashada. b. Adeegso fiilooyin gaashaaman oo gaar ah si aad u gudbiso calaamadaha. c. Ku dar gaashaanka dibedda si aad u garaacdo calaamadaha.
Waa maxay waqtiga gaarsiinta AOOD mar amar la bixiyo?
Waxaan leenahay tiro macquul ah oo loogu talagalay inta ugu badan siddooyinkii silsiladda, sidaas darteed waqtiga dhalmada badiyaa waa hal toddobaad gudahood. Wareegyada siibashada cusub, waxay u badan tahay inaan u baahan nahay 2-4 toddobaad.
Sideen ugu dhejin karaa giraanta sibidhka leh daloolka?
Caadi ahaan waxaan ku dhejinnaa mashiinka rakibidda iyo fur fur, waxaan ku dari karnaa flange si aad ugu dhigto rakibiddaada haddii aad u baahato.
Si aad u hesho laba-band 2-axis nidaamka anteeno dayax-gacmeedka badaha dhijitaalka ah, miyaad ku talin kartaa qaar ka mid ah xalalka giraanta siibista?
AOOD waxay bixisay noocyo farabadan oo silsilado silsilado ah oo loogu talagalay nidaamyada anteenada, oo ay ku jiraan nidaamyada anteenada badda iyo hababka anteenada wadada. Qaarkood waxaa looga baahan yahay inay wareejiyaan signalada soo noqnoqoshada sare qaarkoodna waxay u baahan yihiin shahaadada ilaalinta sare, tusaale ahaan IP68. Dhammaanteen waan samaynay. Fadlan la xiriir AOOD si aad u faahfaahiso siddooyinkii silsiladda.
Iyada oo ay sii kordhayso tiknoolajiyadda cusub, ayaa loo baahan yahay siddooyin simbiriirixan oo horumarsan si loogu wareejiyo calaamado gaar ah. Waa kuwee calaamadaha lagu wareejin karo giraanta silsiladda AOOD?
Iyada oo sannado badan R&D iyo waayo -aragnimo iskaashi, AOOD siddooyinkii siibidda ayaa si guul leh loogu wareejiyay jilitaanka signalada fiidiyaha, signalada fiidiyowga dhijitaalka ah, soo noqnoqoshada sare, xakamaynta PLD, RS422, RS485, Inter Bus, CanBus, Profibus, Net Net, Giga Ethernet iyo wixii la mid ah.
Waxaan raadinayaa giraanta siibashada si aan ugu wareejiyo 1080P iyo qaar ka mid ah kanaalada calaamadaha kale ee caadiga ah ee qaab -dhismeedka yar. Ma bixin kartaa wax la mid ah?
AOOD waxay soo saartay HD siddooyin silsilad ah oo loogu talagalay kamaradaha IP -ga iyo kaamirooyinka HD kuwaas oo wareejin kara labada calaamad HD iyo astaamaha caadiga ah ee qaab -giraanta kaabsal -kabka ee is haysta.
Ma haysaa wax wareejin kara 2000A ama ka sarreeya?
Haa, waan haynaa Xidhiidhiyayaasha korantada ee AOOD ayaa kaliya loo isticmaalaa in lagu wareejiyo midabka asalka ah: #f0f0f0; heerka sare.
Haddii giraanta silsiladdu u baahan tahay shahaadada ilaalinta sare, sida IP66. Xuddunta miyuu weyn doonaa?
Teknolojiyad horumarsan iyo daaweyn khaas ah, AOOD wuxuu sameyn karaa giraan silib ah ma aha oo kaliya IP66 laakiin sidoo kale torque aad u qurux badan. Xitaa giraanta sibidhka xajmiga weyn, waxaan awood u siineynaa inay si habsami leh ugu shaqeyso ilaalin sare sidoo kale.
Mashruuca ROV, waxaan u baahanahay dhowr isgoys oo isku -wareejin ah oo gudbin kara signalada halbeegga fiber optic -ka iyo awoodda badda qoto dheer. Ma bixin kartaa wax sidaas oo kale ah?
AOOD waxay si guul leh u siisay ROV -yada iyo codsiyada kale ee badda badiyaal kala -goysyada kala -guurka ah. Deegaanka badda, annagu waxaan si wadajir ah ugu biirineynaa isku -xirka wareegga fiber -optic -ga giraanta silsiladda korantada, si aan ugu gudbino signalada fiber optic, awoodda, xogta iyo signalada hal kulan oo dhammaystiran. Intaa waxaa dheer, waxaan si buuxda u tixgelinaynaa xaaladda adeegsiga, hoyga giraanta simbiriirixa waxaa laga samayn doonaa bir bir ah, magdhowga cadaadiska iyo heerka ilaalinta IP68 sidoo kale waa la qaadan doonaa.
Hi, kooxdayadu waxay naqshadeyneysaa mashruuc robotic ah, waxaan u baahanahay xoogaa kala -goysyada rookaha ah si aan u xallino dhibaatooyinka fiilooyinka, ii sheeg waxaad u qaban karto.
Codsiga robotic, giraanta siibista waxaa loo yaqaanaa isku -darka rooti rooti ama giraanta siibista robot. Waxaa loo adeegsadaa gudbinta signalada iyo awooda min salka ilaa cutubka xakamaynta gacanta ee robotic. Waxay ka kooban tahay laba qaybood: hal qayb oo taagan ayaa lagu rakibay gacanta robotka, qaybna meerto ah waxay ku dhejisaa curcurka robotka. Iyada oo leh isugeyn rooti rooti ah, robotku wuxuu ku guuleysan karaa 360 wareeg oo aan dhammaad lahayn iyada oo aan lahayn wax dhibaato ah oo fiilo. Marka loo eego tilmaamaha robots -ka, kala -goysyada rookaha ayaa aad u kala duwan. Sida caadiga ah robot dhammaystiran wuxuu u baahan doonaa dhowr siddo oo roogga roogga ah oo siddooyinkan siibistu malaha waxay leeyihiin shuruudo kala duwan. Illaa iyo hadda, waxaan hore u bixinnay siddooyinkii kaabsulka is-haysta, iyada oo loo marayo siddooyinkii silsiladda dhalada, siddooyinkii keegga digsiga, kala-goysyada fiber-optic, kala-goysyada wareegga elektiroonigga ah iyo xalalka kala-guurka ee caadiga ah ee robotics-ka.
Xalka giraanta siilkaagu wuxuu u muuqdaa mid wanaagsan, laakiin tijaabooyinkee baad samayn doontaa? Sidee u dhaqantaa?
Kulammada giraanta silsiladda ee caadiga ah, sida AOOD siddo yaryar oo sibidh is haysta, waxaan tijaabin doonnaa korantada hawlgalka iyo hadda, signalada, torque, qaylada korantada, ka -hortagga dahaarka, xoogga dielectric, cabbirka, qalabka iyo muuqaalka. Heerka milatariga ama siddooyin kale oo si gaar ah loogu baahan yahay, sida xawaaraha sare iyo kuwa loo adeegsan doono gawaarida biyaha hoostooda, difaaca & milatariga iyo siddooyinkii mashiinnada culus, waxaan samayn doonaa shoog farsamo, baaskiil heerkulka, heerkulka sare, heerkul hoose, gariirka, huurka, faragelinta signal, tijaabooyinka xawaaraha sare iyo wixii la mid ah. Imtixaanadani waxay noqon doonaan kuwo waafaqsan halbeegga milatariga Mareykanka ama xaaladaha imtixaanka ee cayiman ee macaamiisha.
Waa maxay silsiladaha HD-SDI ee aad haysato? Waxaan u baahanahay kuwo kale oo badan.
Waqtigan xaadirka ah, waxaan leenahay 12way, 18way, 24way iyo 30way SDI siddo. Waxay yihiin kuwo isku dhafan oo si sahlan loo rakibi karo. Waxay hubiyaan inay si siman u wareejinayaan fiidyowyada qeexitaanka sare waxayna buuxin karaan shuruudaha TV -ga iyo codsiyada filimada.